Soo ogow tabaha ugu fiican si aad timahaaga ugu koraan | Bezzia
Tabaha lagu koriyo timaha
Susana Garcia | 10/06/2021 20:00 | Quruxda, Khiyaamada quruxda
Marar badan ayaan timaha waan jaranay isla markiibana waxaan rabnaa inay dib u soo baxaan inaad yeelato timo qurux badan markale. In kasta oo maalmahan timaha leh midi iyo gaagaaban ay aad u badan yihiin, haddana waxaa jira dad badan oo doonaya inay timahoodu koraan si ay u yeeshaan mandheer dheer. Marka waxaan arki doonnaa tabaha qaar si timahan ay xoogaa dhaqso u kobcaan oo ay dib ugu soo laabtaan timo dheer oo ay ku sameystaan ​​timo xiisa leh.
Qaarbaa jira tabaha si ay u koraan timaha, inkasta oo ay tahay inaan maskaxda ku hayno in timuhu leeyihiin dherer hidde ahaan loo go'aamiyay sidoo kale xawaaraha koritaanka timuhu sidoo kale wuxuu ku xiran yahay qof walba. Laakiin halbeegyadan gudahood waxaan timaha uga dhigi karnaa kuwo si wanaagsan u kora oo xitaa ka caawiya inay wax u koraan si dhakhso leh oo ka xoog badan.
1 Ha filanin mucjisooyin
2 Ka taxaddar marka aad maydhayso
3 Isticmaal rosemary
4 Qaado waxyaabo dheeri ah
Ha filanin mucjisooyin
Waxa ugu horeeya waa inaad ogaataa inay tahay inaadan filayn mucjisooyin, Maaddaama guud ahaan timaha qof kastaa qaato si ay u koraan oo u koraan qiyaastii hal sentimitir bil kasta. Laakiin tan dhexdeeda, waxaan had iyo jeer ka caawin karnaa timaha inay si dhakhso leh u koraan oo xoog badan yeeshaan. Waa muhiim inaadan rajo badan ka qabin helitaanka manka waqti gaaban. Haddii aan leenahay dhacdo oo aan dooneyno inaan muujino timo waxaan marwalba adeegsan karnaa kordhinta weyn.
Ka taxaddar marka aad maydhayso
Dhaqiddu waa a caado aan u siino ahmiyada ay leedahay. Maydhista timaha ayaa lagama maarmaan u ah inay caafimaad qab u yeelato maaddaama wasakhda laga saaro aagga madaxa, laakiin maydhashada xad-dhaafka ahi waxay dhaawici kartaa oo dhaawici kartaa madaxa, xitaa waxay u horseedi kartaa inuu dhaco ama jabo, taasoo ka dhigaysa inay u muuqato mid ka gaaban oo aan caafimaad lahayn. Waa inaad ku dhaqdaa shaambada saxda ah, haddii ay suurtagal tahay shaambo dabiici ah oo aan saliidaha ka saareynin timahaaga oo aan ku darin silikoon ama parabens-ka caanaha. Si tartiib ah ugu maydh timaha madaxa, adoo u oggolaanaya saabuunta inay dhammaato laakiin ha xoqin.
El qaboojiyaha iyo maaskarada ayaa muhiim u ah jilicsanaanta timaha oo daryeelo darafyadiisa, kuwaas oo u muuqda inay si aad ah u qalalaan. Qaboojiyaha waa in la isticmaalaa maalin kasta marka aan dhaqo timaha, laakiin maaskarada waxaa loo isticmaalaa marmar. Waxyaabahani waxay naga caawinayaan inaan daryeelo darfaha oo aan ka ilaalino inay jabaan oo ay waxyeeleeyaan, taas oo keeneysa in timuhu lumiyaan qayb ka mid ah dhererkooda hawsha.
Rosemary waa shey ka caawiya timaha si wanaagsan inay u koraan maxaa yeelay waxay ka caawisaa hagaajinta wareegga aagga madaxa. Haddii wareegga dhiiggu wanaagsan yahay, waxay waraabisaa xididdada timaha taasoo ka dhigaysa timaha inay si wanaagsan u koraan. Waxa jira alaabooyin qaarkood oo leh rosemary laakiin sikastaba ha noqotee waxaad ku samayn kartaa faleebo geedka waxaadna u isticmaali kartaa biyahaas inaad ku xoqdo madaxaaga. Waa inaad sameysaa dhowr jeer usbuucii si aad u aragto horumar. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay ka caawineysaa timaha inay hoos u dhacaan waqtiyada sida dayrta. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta wareegga waxayna timaha ka dhigeysaa kuwo dhaqso u kora.
Qaado waxyaabo dheeri ah
Haddii timahaagu u weynaan waayaan had iyo jeer waxay noqon karaan maxaa yeelay waxaad ka maqantahay xoogaa nafaqo ah. Ku Kaabista timaha waxay noqon kartaa caawinaad weyn waqtiyada Taas oo ay ku dhacdo laakiin sidoo kale markay korayso, maxaa yeelay haddii aan qaadanno inta badan way sii xoogaysataa, maadaama ay leedahay nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeri ah laakiin ku dhowaad dhammaantood waxay ka kooban yihiin nafaqooyin ay ka mid yihiin zinc, fitamiin B, birta ama biotin, maadaama dhammaantood ay gacan ka geystaan ​​sameynta timaha iyo koritaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Tabaha lagu koriyo timaha
Sida fin looga saaro dhabarka
Jimicsiyada lugaha caato ah